Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana - Wikipedia
Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana
Ny Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana na Taratasy voalohan'i Masindahy Paoly ho an'ny Tesalônisianina dia boky hita ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao, izay atao hoe epistily. I Paoly no nanoratra azy. Atao hoe voalohany izy satria misy ny Epistily faharoa ho an'ny Tesaloniana. Nanampy an'i Paoly tamin'ny fanoratana i Timoty (na Timôte) sy i Silasy. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 50 sy 52 no nanoratana azy. Misy toko 5 ity boky ity.
2.1 Toerana nanoratana
3 Votoatin'ny epistily
3.1 Fiarahabana sy vavaka ho an'ny Mpino
3.2 Torohevitra, fananarana, fiavian'i Kristy indray
Πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς / Prôtê Epistolê pros Thessalonikeis no fiantsoana azy amin'ny teny grika fa Epistula I ad Thessalonicenses kosa amin'ny teny latina.
Ny Protestanta malagasy sy ny ankamaroan'ny Kristiana malagasy tsy katolika dia manao hoe Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana (hafohezina amin'y hoe Tesaloniana voalohany) fa ny Katolika malagasy kosa manao azy hoe Epistolà na Taratasy voalohan'i Masindahy Paoly ho an'ny Tesalônisianina (hafohezina amin'ny hoe Tesalônisianina voalohany).
Toerana sy fotoana nanoratanaHanova
Epistily voalohany nosoratan'i Paoly Apostoly ho an'nireo Kristiana tao Tesalonika ny Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana. I Tesalonika (na Salonika) dia renivohitry ny faritany romana atao hoe Makedonia (na Masedonia) sady seranan-tsambo.
Nosoratan'i Paoly tokony ho tamin'ny taona 50 na 51 taorian'i Jesoa Kristy tao amin'ny tananan'i Korinto io epistily io, ka anisan'ny tranainy indrindra amin'ireo boky ao amin'ny Testamenta Vaovao. Nosoratana taorian'ny fiverenan'i Timoty tao Korinto io epistily io. Mpanampy an'i Paoly i Timoty, izay nirahiny hankahery ireo Tesaloniana nenjehin'ny Jiosy. Nitondra vaovao momba ny tsy fivadihan'ireo Kristiana izay niharam-panenjehana izy. Izany fanenjahana izany no nanosika an'i Paoly hanoratra.
Mizara roa lehibe ny epistily: Fiarahabana sy vavaka ho an'ireo mpino (toko 1-3); Torohevitra sy fananarana ary ny amin'ny fiavian'i Kristy indray (toko 4-5)
Fiarahabana sy vavaka ho an'ny MpinoHanova
Fankasitrahana sy hafaliana no nandraisan'i Paoly an'izany vaovao izany (toko 1 hatramin'ny 3). Ao amin'ity epistily ity dia mitatitra ny fahatsiarovany ny asa fanirahana nataony tany Tesalonika i Paoly (2.1-16). Maneho ihany koa ny faniriany fatratra ny hahita ireo Tesaloniana koa izy sady manambara ny zava-kendreny amin'ny fandefasany an'i Timoty ho any.
Torohevitra, fananarana, fiavian'i Kristy indrayHanova
Ny toko faha-4 sy faha-5 dia misy torohevitra sy fananarana ara-pitondran-tena sy amin'ny fampianaram-pinoana. Tokony hadio fitondran-tena ny Kristiana, araka ny nampianaran'ireo Apostoly azy ny Filazantsara, amin'ny fifankatiavana, amin'ny fisahanan'ny tsirairay ny andraikiny avy, ary amin'ny fiasana mba hialana amin'ny fidonanam-poana.
Ireo toko ireo ihany koa no iresahan'i Paoly zavatra tena mampanahiran-tsaina ny Tesaloniana, dia ny amin'ireo mpino maty alohan'ny fiavian'i Kristy indray. Mamaly izany i Paoly amin'ny firesahany ny tsy tokony hanahiana ny amin'izany, satria hampakarina any an-danitra ireo mpino ireo amin'ny fiavian'i Kristy (4. 13-18). Ambaran'i Paoly fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny Tompo sy ny Fitsarana farany, raha mieritreritra ny olona fa mandry ivohon'ny vato. Amin'izany dia tsy hisy zanaky ny maizina izay ho afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, fa ny mpino kosa, dia ny zanaky ny mazava, hahazo fanavotana (5. 1-11).
Miavaka io epistily io amin'ny filazany ny amin'ny fara andro. Mifarana amin'ny tsodrano ny epistily.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_voalohany_ho_an%27ny_Tesaloniana&oldid=1038770"
Dernière modification le 12 Oktobra 2021, à 10:30